Ikhaya > UHAMBO LOKUHLOLA I-EGT
INKCAZELO SIMAHLA RADICAL
Imetabolism yomzimba eqhelekileyo
Ungcoliseko olunzima lwentsimbi
Ungcoliseko lwezibulali zinambuzane
IIMPAWU ZASEKHAYA NEZIFO
Ngokwesiqhelo, ii-radicals zasimahla ziyafuneka kwimizimba, kodwa ukugqithisa okugqithisileyo kunokubangela ukungalingani kokusebenza komzimba, emva koko kukhokelele kuxinzelelo lwe-oxidative oluvela kwizifo ezahlukeneyo (uncwadi lubonisa ukuba iiradicals zasimahla zingumthombo wezifo ezahlukeneyo).
Imizimba yethu ayinakho ukusebenza ngaphandle kweoksijini, kwaye nje ukuba inani elikhulu lamahhala e-radicals lenyuke, umzimba ophantsi koxinzelelo lwe-oxidative uya kubangela ukuba inkqubo yokulungisa ihluleke ekususeni i-radicals yamahhala. Kwiimeko ezizodwa, umzimba kufuneka uzalise ii-antioxidants in vitro ukususa iiradicals ezigqithileyo simahla.
L-ERGOTHIONEINE -UHLOBO OLUTSHA LWE-ANTIOXIDANT YENDALO
I-EGT yi-chiral yendalo i-amino-acid antioxidant biosynthesized kwiibhaktheriya ezithile kunye nefungi. Yindibaniselwano ebalulekileyo ye-bioactive esetyenzisiweyo njengesikrelemnqa esiqwengayo, isicoci se-ray ye-ultraviolet, umlawuli weempembelelo zokunciphisa i-oxidation kunye ne-bioenergetics yeselula, kunye ne-cytoprotector yomzimba, njl.
I-L-Ergothioneine (i-EGT, i-ERGO, i-CAS: 497-30-3), ekwabizwa ngokuba yi (S) -cy-Carboxy-2,3-dihydro-N, N, N-trimethyl-2-thioxo-1H-imidazole- I-4-ethanaminium yangaphakathi yetyiwa, yaqala ukukhutshwa kwi-ergot nguTanret C ngo-1909, emva koko kwafunyanwa negazi lesilwanyana. I-EGT ecocekileyo yikristale emhlophe, inyibilika emanzini, (inyibilikisiwe i-0.9mol / L kubushushu begumbi). I-Autoxidation ayinakwenzeka kwixabiso le-pH yemvelo okanye kwisisombululo esomeleleyo se-alkali. I-EGT inokubakho kwiifom ezimbini ze-isomer - ifom ye-thiol kunye nefom ye-thione, njengoko kubonisiwe ngezantsi:
Ngezibonelelo zemisebenzi emininzi, I-EGT ime phakathi kwezinye ii-antioxidants ezininzi.
Ngezibonelelo zemisebenzi emininzi, i-EGT ibonakala phakathi kwezinye izinto ezininzi antioxidantsIzibonelelo (ngokuthelekiswa ne-glutathione, cysteine ​​njl.):
I -EGT ilula kakhulu ukuqokelela kwiiseli kwaye uxinzelelo luzinze ngakumbi ezinye i-antioxidants.
-I-EGT isebenza ngakumbi ekunciphiseni ukufa kweseli okubangelwa yipyrogallol.
I -EGT ikakhulu ityhoboza i-ROS ukuthintela i-oxidation, ngelixa i-glutathione kunye nezinye ziqhekeza i-radicals yasimahla, Oko kukuthi, enye antioxidants hlamba iimveliso ze-oxidation.(1) Oleoylethanolamide (oea) –i-wand yomlingo yobomi bakho
iziphumo: I-EGT ibingoyena mlingisi osebenzayo wee-radicals zasimahla xa kuthelekiswa ne-antioxidants zakudala njenge-GSH, i-uric acid kunye ne-trolox. Ngokukodwa, amandla aphezulu e-antioxidant aboniswe yi-EGT vs peroxyl radicals abangele i-25% ephezulu kunexabiso elifunyenwe ngereferensi ye-antioxidant trolox. Umthamo wokwehla kwe-EGT ngokubhekisele kwi-radicals ye-hydroxyl yayingama-60% ngaphezulu, xa kuthelekiswa ne-uric acid, emele ireferensi antioxidant vs hydroxyl radicals. Okokugqibela, i-EGT ibonakalise owona msebenzi uphezulu we-antioxidant ukuya kwi-peroxynitrite, ene-10% ephezulu kunaleyo ye-uric acid.
I-EGT ineempembelelo kulawulo lwe-intracellular energy,
ukuphucula inqanaba lokusinda kwesidoda,
ukukhusela isibindi ekonzakaleni,
iziphene zophuhliso kunye nekati.
① I-EGI IBONAKALISIWE KAKHULU KWIZITHILI NEZILWANYANA
5-10mg ngeyunithi yabantu abadala kunye neeyunithi ezi-2-3 zokutya okokoko kubalulekile ekutyeni kwakho kwemihla ngemihla.
Umthombo: Li Yiqun, Zhou Nianbo. Imisebenzi ye-Biology kunye nokusetyenziswa kwe-EGT [J]. Ubunjineli bokutya, 2010 iim9 （3） ： 26-28.
Ukungeniswa kudweliswe ngolu hlobo lulandelayo:
Abantwana (iminyaka emi-3 ukuya kwe-11) ≤l 0 mg / usuku
Ulutsha (iminyaka eli-11 ukuya kwelama-21） ≤30 mg / usuku
Qaphela: 1. Imithamo yabantwana kunye nabantu abadala （iminyaka emi-3 -80 ubudala）
Ukusetyenziswa kwabasetyhini abakhulelweyo okanye abancancisayo akukhuthazwa.
Umthombo wedatha: I-Tetrahedron xa ufaka isicelo se-US NDI
Idatha iphakamisa ukuba: 10.5mg / g ye-OXIS's ADI (eyamkelekileyo imihla ngemihla).
Okwangoku, zintathu iindlela zokuvelisa i-EGT: endalo Ukukhupha i-bio (ikakhulu amakhowa, izicwili zezilwanyana kunye nokutsalwa kwegazi), kunye nendlela ye-biosynthesis.
Thelekisa ukukhutshwa kwe-EGT tindlela
I-EGT inezicelo ezibanzi kwizithambiso, ukutya okusebenzayo, amayeza, amayeza, i-biomedicine, njalo njalo.
(3) EZINYE IZICELO EZIFUMANEKAYO
I-Oleoylethanolamide (oea) -i-wand yemilingo yobomi bakho
I-Anandamide vs cbd: yeyiphi engcono kwimpilo yakho? Yonke into ekufuneka uyazi ngabo!
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-nicotinamide riboside chloride
Izongezo zeMagnesium l-threonate: izibonelelo, idosi, kunye neziphumo ebezingalindelekanga
Palmitoylethanolamide (ertyisi): izibonelelo, idosi, ukusetyenziswa, isongezelelo
Izibonelelo zezempilo ezi-6 eziphezulu ze-resveratrol supplements
Olona nyango lwe-alpha gpc
Olona nyango lulungileyo lokuguga lwenicotinamide mononucleotide (nmn)
1.IENKCAZELO EBANZI YOKUSEBENZA
2.IINKCUKACHA ZESIFO NEZIFO
I-4.L-ERGOTHIONEINE-UHLOBO OLUSHA LWE-ANTIOXIDANT YENDALO
7. EMINYE IMISEBENZI